Waa ayo Ms Puiyi Markale? - Model-ka Viral Super ee noqday Xiddigta Instagram-ka Caalamiga ah - Muuqaalka Cradle
Leave a Comment Waa ayo Ms Puiyi Markale? - Model-ka Viral Super ee noqday Xiddigta Instagram-ka Caalamiga ah
Ms Puiyi oo si fudud loogu yaqaanno khadka tooska ah sida: @mspuiyi waa Model sare oo Instagram ka ah PRC caan ku ah muuqaalkeeda soo jiidashada iyo muuqaalka quruxda badan waxay isticmaaleysay Instagram in ka badan 5 sano hadda waxayna abuurtay ilaa maanta in ka badan 13 milyan oo taageerayaal firfircoon akoonkeeda. Taasi waa guul aad u weyn, qaar badan oo naga mid ah ayaa la yaabi doona sababta?
Qoraal uu wadaagay penke (@ms_puiyi_fan_cilab_)
Sidee ku bilaabmeen? Sidee ayayse ugu kortay akoonkan yar ee aan kala go’a lahayn ee ay u noqotay goob ganacsi oo ka kooban qaarado badan oo ay og tahay inay iibiso agabka la isku qurxiyo ee aan tiro lahayn iyada oo adeegsanaysa khadka quruxda Ms Puiyi Cosmetics.
Naruto LED Light Night Light
Recently, Marwo Puiyi lahaa kor u kac weyn ee taageerayaasha, dhawaan helay wax yar ka yar 1,000,000 bil gudaheed. Tani waa guul aad u guul ah oo aan la aqoonsanayn haba yaraatee dhanka Puiyi. Haddaba waa maxay waxa ku saabsan akoonkeeda taas oo macnaheedu yahay inay awood u leedahay inay kasbato dhammaan kuwa raacsan oo ay hesho qadarka jecel ee ay ku sameyso boostada kasta? Maqaalkan waxaan ku dhex mari doonaa su'aalahan ee fadlan sii akhri.
Taariikhda soo dhejinta Ms Puiyi waa mid aad u xiiso badan waxayna lahayd xisaabaadyo taageereyaal badan oo magaceeda lagu sameeyay. Dhawaan waxa ay soo galinaysay sawiro badan oo daaha ka qaaday bogeeda Instagram-ka waana arki karnaa sababta. Inta badan qoraaladeeda ayaa ah kuwo aad u qurux badan waxayna ku soo bandhigaan meelo badan oo kala duwan iyo boosas, hoos ka eeg:
Ms Puiyis muuqaalka ayaa sidoo kale isbedelay marar badan oo kala duwan intii ay ku jirtay app-ka. Ka soo bixitaankii maariin madow una gudubtay timo dhalaalaya timaheeda waxay aragtay midabyo iyo qaabab kala duwan, kuwaas oo dhammaantood soo jiitay indhaha taageerayaasheeda 13m ee daacadda ah. Waxay isku dayday noocyo kala duwan oo muuqaal iyo doorar ah oo ay ku jiraan macalin, kalkaaliye caafimaad iyo xitaa qof matalaya diinta.
Nasiib darro dhalinyarada Marwo Puiyi waxay la kulantay khilaafyo iyo dhibaatooyin barta Instagram-ka, iyada oo akoonkeeda la joojiyay oo ku dhawaaday in la joojiyo qoraalada aan haboonayn. Tani wax la yaab leh maaha oo qoraaladeeda ayaa tan xoojin doona. Laakiin waa maxay sababtu? Hagaag jawaabta fudud waa ka qaybgalka iyo gaadhista. Waxaa ka sii muhiimsan noocyada qoraallada ay Instagram tusi doonaan dad badan haddii ay helaan dareenka saxda ah.
Waxay u muuqataa maanta in masiirka hore ee akoonkeeda uu hadda go'aamiyay Instagram Gods iyo mid nasiib darro ah oo niyadjab leh dhammaan taageerayaasheeda 13m iyo kuwa jecel. Markaa xisaabteedii ma soo noqonaysaa? Oo waligeed ma ka tegi doontaa dhexdhexaadiyeyaasha Instagram kaligeed? Hoos isdiiwaangeli si laguula socodsiiyo markaan maqaal cusub soo galino
Waxaad sidoo kale naga heli kartaa Instagram halkan:
Gelitaan Hore Top 10 Jacayl Anime Si Aad U Daawato On Roll Crunchy
Gelitaanka Xiga Meelaha ugu Fiican ee Bilaashka Anime ee Bilaashka ah Luulyo 10